Sistemụ Ndị mmadụ
Ihe ntụgharị IR Beam
Ndị mmadụ na -agụta igwefoto
Counter Ndị njem/MDVR
Sensọ na -agụta ọnụnọ
MRB dị na Shanghai, China. A maara Shanghai dị ka "Oriental Paris", Ọ bụ mpaghara akụ na ụba na ego China na ọ nwere mpaghara azụmaahịa mbụ nke China (mpaghara ikpe azụmaahịa efu).
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 nke ọrụ, MRB nke taa etolitela n'ime otu ụlọ ọrụ ama ama na ụlọ ọrụ na -ere ahịa China nwere nnukwu mmetụta na inye ndị ahịa azụmaahịa, gụnyere ndị mmadụ na -agụta usoro, sistemụ ESL, sistemụ EAS na ngwaahịa ndị ọzọ metụtara ya.
A na -ebupu ngwaahịa anyị n'ihe karịrị mba na mpaghara 100 n'ụlọ na mba ofesi. Site na nkwado siri ike nke ndị ahịa anyị, MRB emeela nnukwu ọganiihu. Anyị nwere usoro ịre ahịa pụrụ iche, ndị otu ọkachamara, njikwa siri ike, ngwaahịa dị mma na ọrụ zuru oke. N'otu oge ahụ, anyị na -elekwasị anya na teknụzụ dị elu, ihe ọhụrụ na nyocha ngwaahịa na mmepe iji gbanye ume ọhụrụ n'ime ika anyị. Anyị na-agbasi mbọ ike ịnye ngwaahịa na ọrụ ọkachamara dị iche iche na ngwaahịa dị iche iche maka ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ụwa niile, yana imezi azịza amamihe ahaziri iche maka ndị ahịa anyị na-ere ahịa.
Onye anyị bụ？
MRB dị na Shanghai, China.
E guzobere MRB n'afọ 2003. Na 2006, anyị nwere ikike mbubata na mbupụ nkeonwe. Kemgbe e guzobere ya, anyị na -agba mbọ inye ndị ahịa azụmaahịa ihe ngwọta dị mma. Ahịrị ngwaahịa anyị gụnyere usoro ndị mmadụ na-agụta, sistemụ akara elektrọnik, sistemụ onyunyo elektrọnik na sistemụ ndekọ vidiyo dijitalụ, wdg, na-enye azịza zuru oke zuru oke maka ndị ahịa na-ere ahịa n'ụwa niile.
Kedu ihe MRB na -eme?
MRB bụ ọkachamara na R&D, mmepụta na ire ahịa nke ndị mmadụ counter, sistemụ ESL, sistemụ EAS na ngwaahịa ndị ọzọ metụtara ya maka azụmaahịa. Ahịrị ngwaahịa ahụ na-ekpuchi ihe karịrị ụdị 100 dị ka tebụl ndị mmadụ IR, tebụl ndị mmadụ 2D, tebụl ndị mmadụ 3D, igwe mmadụ na-agụta AI, ihe mgbochi ụgbọ ala, tebụl ndị njem, akara shelf elektrọnik nke nwere nha dị iche iche, ngwaahịa mgbochi ọnụnụ. wdg
A na -eji ngwaahịa a n'ọtụtụ ụlọ ahịa na -ere ahịa, agbụ uwe, nnukwu ụlọ ahịa, ihe ngosi na oge ndị ọzọ. Imirikiti ngwaahịa a agafeela FCC, UL, CE, ISO na asambodo ndị ọzọ, ngwaahịa ndị ahụ enwetala otuto sitere n'aka ndị ahịa.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ MRB?
1. Igwe nrụpụta ruru eru
Imirikiti akụrụngwa n'ichepụta anyị na -ebubata ozugbo site na Europe na America.
2. ezi R&D ike
Ọ bụghị naanị na anyị nwere ndị ọrụ aka ọrụ anyị, kamakwa anyị na mahadum na -arụkọ ọrụ iji duzie nyocha na mmepe ngwaahịa. Site na mbọ na -aga n'ihu, anyị na -edobe ngwaahịa anyị na mbido ụlọ ọrụ.
3. Njikwa Ogo siri ike n'oge akụkụ 3 tupu mbupu
Core Raw Ihe njikwa mma.
Ing Nnwale Ngwaahịa Emechara.
Control Njikwa ogo tupu izipu ya.
4. OEM & ODM dị
Biko gwa anyị echiche gị na ihe ị chọrọ, anyị dị njikere isoro gị rụọ ọrụ iji hazie ngwaahịa gị pụrụ iche.
Ndị enyi anyị
Ndị enyi anyị si mba dị iche iche nke ụwa.
Ịmatakwu gbasara anyị ga -enyere gị aka karịa.
Ọrụ tupu ire ere
Jiri ahụmịhe ụlọ ọrụ anyị afọ 20 iji kwado gị kacha mma na ngwaahịa kachasị dabara maka gị.
Onye na -ere ahịa yana onye ọrụ nka ga -enye gị ọrụ zuru oke n'oge usoro a niile.
Usoro nzaghachi awa 7*24.
Nkwado teknụzụ na -akwado ọrụ ọzụzụ ọrụ aka
Nkwado ọnụahịa onye nkesa
Nkwado ntanetị 7*24 awa
Ogologo akwụkwọ ikike ọrụ
Ọrụ nloghachi oge niile
Ọrụ nkwalite ngwaahịa ọhụrụ
Ọrụ nkwalite ngwaahịa efu
A na -ebupu ngwaahịa anyị n'ihe karịrị mba na mpaghara 100 n'ụlọ na mba ofesi. Site na nkwado siri ike nke ndị ahịa anyị, MRB emeela nnukwu ọganiihu.